Halyeeyga reer Portugal ee Ricardo Carvalho oo ka hadlay heshiiska uu Hazard ku yimid kooxda Real Madrid – Gool FM
(Madrid) 24 Juunyo 2019. Daafacii hore kooxaha Chelsea, Real Madrid iyo xulka qaranka Portugal ee Ricardo Carvalho ayaa shaaca ka qaaday waxyaabo qaar ee si weyn u caawin doono xiddiga dhawaan galka ah Los Blancos ee Eden Hazard.
Wargeyska “Mirror” ee dalka England ayaa shaaca ka qaaday waxyaabihii ugu muhiimsanaa uu ka hadlay halyeeyga reer Portugal ee Ricardo Carvalho waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Hazard waa heshiis weyn, si wanaagsan ayaan u garanayaa, shaki kama qabo inuu fiicnaan doono, wuuna ku guuleysan doonaa Real Madrid”.
“Spain wuxuu ka heli doonaa boos banaan, waa ciyaaryahan aad u dhaqsi badan, kuna xoogan, xaaladaha shakhsiyeed”.
“Waa muhiim inaad sameyso koox weyn, sidaas darteed waxaa wanaagsan inay ku bilaawdaan guul kulamada ay ciyaari doonaan”.
Ricardo Carvalho ayaa wuxuu u soo ciyaaray kooxda Chelsea 2004-tii ilaa iyo 2010-kii, wuxuuna la qaaday seddex jeer ee ah horyaalka Premier League, 2 jeer EFL Cup, FA Community Shield oo 2 jeer ah, kahor inta uusan u dhaqaaqin Real Madrid wuxuuna qeyb ka ahaa ilaa iyo 2013-kii, inta uu ku sugnaa mudadaasna wuxuu kula guuleystay horyaalka La Liga iyo Copa del Rey oo min hal jeer ah.